Laacib caan ka ah EPL oo saliidda ilmaha marsada kahor kulamada uu ciyaaro & xeesha ku jirta | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Laacib caan ka ah EPL oo saliidda ilmaha marsada kahor kulamada uu...
(Wolverhampton) 02 Maarso 2021 – Garab-weerarka Wolverhampton Wanderers’ ee Adama Traore ayaa ah nin had iyo goor dhiba daafacyada dadabyada ka dheela oo uu ku dhaafo tillaabo dheeri iyo xoog, balse kooxdan Premier League ay keentay xal kale oo adkaynaya in la qabto.
Maamulka caafimaadka ee kooxda Wolves ayaa la yimid xeelad ay saliidda carruurta ku marinayaan murqaha laacibkan kahor ciyaar kasta, taasoo sida uu qabo macallin Nuno Espirito Santo ka caawinaysa inuu Traore uga badbaado dhaawac soo gaari lahaa, gaar ahaan kaddib markii uu garabka ka dhaawacmay.
Nuno oo ay kooxdiisu caawa wajahayso kooxda cararaysa ee Manchester City ayaa ku dooday in dhaawacaasi soo gaarey kaddib markii uu gacanta ku dhegey mid daafac ah, isagoo tilmaamay in marka saliidda ciyaalka la mariyo uu jirkiisu sabiibax noqonayo.
Traore oo 25-jir ah oo sanadkii hore 4 gool iyo 9 dhigis ka sameeyey EPL si uu kooxdiisa uga caawiyo inay gasho kaalinta 7-aad ayaa inta badan halis joogto ah ku ah daafaca kooxda kale.
Previous article”Warqaddii Villa Somalia waxay noqon kartaa turubkii ugu dambeeyey!” – Mowjado jahawareer ah oo markale soo noqday & Maraykanka oo digniin diray
Next articleDEG DEG: ”Madaxtooyadu waxay carqaladaynaysaa wada hadalladii socdey!” – Musharrixiinta oo shir jaraa’id qabtay